प्रकाशित मिति : २०७४ पौष २८ शुक्रबार , २,४३६ पटक हेरिएको
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सशस्त्र प्रहरी बलको खरिद प्रक्रिया, टेन्डर र रासनभत्तामा अनियमितताको आशंकामा छानबिन थालेको छ। तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईको सचिवालयले टेन्डर प्रतिस्पर्धा नै नगराई ८० लाख रुपैयाँ बराबरको कम्प्युटर खरिद गरेको विषयसमेत अख्तियारको छानबिनभित्र परेको छ।
सचिवालयमा कार्यरत तत्कालीन डीआईजी शैलेन्द्र खनाल (हाल एआईजी) ले आफ्ना ज्वाइँ नाता पर्ने जनार्दन केसीमार्फत कम्प्युटर खरिद गरेका थिए।
उनले भने, ‘केही खरिद प्रक्रियामा अख्तियारले सोधपुछ गरेको मैले सुनेको छु। छानबिन हुनु पनि पर्छ। तर, संगठन प्रमुखले मातहतका सबै निकायलाई कानुनसम्मत गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। छानबिन गर्नु नै गलत गर्‍यो भन्ने होइन।’ (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)
सशस्त्रका ‘फाजिल’ एआइजीहरु काममा कि बेकाममा ?
सशस्त्रका असईको मृत्यु रहस्यमय, परिवारलाई नै थाहा नदिई 'पोस्टमार्टम'
लाटीलाई जबर्जस्ती करणी गर्ने सशस्त्र प्रहरीका जवानलाई १० वर्ष कैद
सशस्त्रमा बढुवा सिफारिस, को को परे ?
सशस्त्र प्रहरीका आठ डीआईजीको सरुवा, को कता ?
सशस्त्रको आइजीपीका लागि रस्साकस्सी, खनाल अगाडि
उत्तरी सीमा रेखदेखका लागि सशस्त्र प्रहरी खटियो
सशस्त्र प्रहरीको एआइजीका लागि ५ जनाको नाम सिफारिस, को को परे ?